Maamulkii ugu horreeyey oo bilaabay diiwaangelinta musharrax... - Axadle Wararka Maanta
Kismaayo (Axadle) – Jubbaland ayaa noqotay maamulkii ugu horreeyey ee bilaaba qabashada doorashada Aqalka Sare, kadib markii shalay madaxweynaha Jubbaland uu soo saaray musharraxiinta u tartameysa afar ka mid ah sideeda kursi ee maamulkaasi.
Jubbaland ayaa sidoo kale maanta oo ay ku beegan tahay 28-ka July billowday diiwaan-gelinta xubnaha musharraxiinta, waxaana haatan ku howlan guddiga doorashada ee heer dowlad goboleed ee maamulkaas oo garab ka helaya kan doorashada ee heer federaal.
Sidoo kale Jubbaland ayaa shaacisay in doorashada Aqalka Sare ay dhaceyso beri isla-markaana lasoo dooran xubnihii ugu horreeyey ee Senatorada cusub, waxaana qorshuhu yahay in lasoo doorto illaa 4 Senator oo ka mid ah xubnaha ka imaanaya Jubbaland.
Dhanka kale waxaa Kismaayo maanta ku wajahan wafdi uu hoggaaminayo Cabdullaahi Abyan Nuur oo ah guddoomiyaha guddiga xallinta khilaafaadka doorashooyinka dalka.
Guddigan ayaa Kismaayo u tegaya ka qeyb-galka doorashada Aqalka Sare ee beri ka dhaceyso halkaasi, si ay goob joog u noqdaan doorashada Senetarada cusub.
Jubbaland oo mar ka mid ah aheyd muumallada sida weyn uga soo horjeeday dowladda dhexe, isla-markaana diidanaa hannaanka u wajaheyso doorashada ayaa hadda hoggamineyso maamullada kale, si loo qabto doorashada xildhibaanada labada Aqal.
Soomaaliya ayaa haatan ku jirto marxalad doorasho, kadib markii heshiis rasmi ah looga gaaray Caasimadda Muqdisho is jiid-jiidkii siyaasadeed ee muddada ka taagnaa doorashada.